नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्न सकिने सम्भावना छ : विश्वप्रकाश शर्मा
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालसँग संयुक्त आन्दोलन गर्न सकिने बताएका छन्। मुलुकले आवश्यकता महसूस गर्दा संयुक्त आन्दोलन गर्न सकिने सम्भावना बाँकी नै रहेको शर्माले बताए । नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति ललितपुरले सोमबार आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता शर्माले नेकपाको एउटा गुटसँग आन्दोलनमा जान नसकिने बताएका हुन् ।
शर्माले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भनेर हामीले पुस ५ गते नै निर्णय गरिसकेका छौं र विज्ञप्ति जारी गरेका छौं । प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले अपील गरिरहनुभएको छ । तर हामी संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका छैनौं किनकि पहिलो उहाँहरू नेकपा नै हुनुहुन्छ, एउटा सरकारमा छ, एउटा सडकमा छ। एउटा समूहले सरकार चलाइरहेको छ, नेकपाको अर्को गुटसँग आन्दोलनमा जान सक्दैनौं। संयुक्त हुनको लागि पूर्वशर्त जरुरी छन्।’
प्रवक्ता शर्माले मुलुकले आवश्यकता महसूस गर्‍यो भने संयुक्त आन्दोलनमा जान सकिने तर त्यसका लागि प्रचण्ड-नेपालले आत्मालोचना गर्नुपर्ने विषय रहेको बताए। नेकपा नेत्री रामकुमारी झाँक्री पक्राउ गर्दा आफूले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गरेको स्मरण गर्दै प्रचण्ड–नेपालसँग शर्माले प्रश्न गरे, ‘हिजो रामचन्द्र पौडेललाई गिरफ्तार गर्दा बोल्नुभयो ? प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ यही हुनुहुन्थ्यो होला नि !’
प्रवक्ता शर्माले भने, ‘हिजो सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको बेला प्रचण्ड–नेपाल बोल्नुभयो कि भएन ? डा. गोविन्द केसीको माग उल्ट्याउँदै विधेयक पारित गर्न संसदमा मार्शल लगाएर पास गर्दा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कि थिएन ? सरकारले गुठीको जग्गा कब्जा गर्न थालेको बेला गुठी विधेयकको विरुद्धमा हामी बोल्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल उभिनुभएको थियो कि थिएन ? यो बेलामा संयुक्त आन्दोलनमा जाने भन्दै गर्दा आत्मालोचित हुनुपर्‍यो।’